Tattoos enencazelo - Tattoos Art Ideas
Izinyoni ziyaziwa ngokuthi izidalwa zamahhala eziyisizathu sokuthi kungani abantu abaningi beyiyinki. Kungabandakanya nezinto eziningi empilweni futhi yingakho ungathola amadoda nabesifazane abasebenzisa wona. Abanye abantu bahlobanisa i-tattoo yezinyoni ngobukhulu, inkululeko, ukuthula, uthando, ulwazi, ukuqonda okuhlakaniphile, ubuhle, ubuhle, umndeni, umama, isiqondiso esingokomoya nokuningi.
Ama-tatto tattoos aklanyelwe ukubukeka epholile futhi engavamile ekwakheni nasebunzeni. Lesi esinye sezizathu zokuthi kungani abantu beyikhetha ngaphezulu kwezinye izinto zokudweba tattoo. Kukhona imiklamo ehlukahlukene yezinyoni zezinyoni ezinezincazelo ezahlukene. Nguwe okufanele unqume uhlobo lenyoni oludinga ukuba lunwe emzimbeni wakho. Izinyoni zifika ngobukhulu futhi zibunjwa futhi ngamunye wazo unokuthile okukhethekile ngabo. Abantu abanesithakazelo sokuthola inkululeko noma ukuzizwa bephila bangakwazi ukwenza lo mdwebo okhethekile we-tattoo. I-tattoo yezinyoni ingafakwa nganoma yikuphi ingxenye yomzimba ngaphandle kokuba ithole ukuthi ilahlekile futhi ingatshela izinto eziningi ngomuntu.
Chofoza lapha ukuze uhlole izinkathi zakamuva zezinyoni zemidwebo umklamo wesilisa nabesifazane.
I-Mandala tattoo kusho
I-tattoo ye-Mandala inezincazelo eziningi futhi ingabonisa ukushona. Umbuthano on tattoo ukhuluma ngokuphelela kanye nokulinganisela kanye nokuphakade, lapho ubheka ibanga yonke indlela kusuka maphakathi kuya wonke amaphuzu. Izinkolo eziningi ziyayisebenzisa ukuze zisho izinto eziningi kubathembekile babo.
UbuHindu - ngokusho kwamaHindu, i-mandala ingasho ukuzindla. Lokhu kungenxa yokuthi lisetshenziselwa ukugxila futhi seliyithuluzi eliphathelene nomoya.
ubuKristu - UbuKristu buyathatha i-mandala kwenye izinga ngoba lingabonisa izingxenye ezihlukahlukene zesonto njengamafasitela abonisa imisebenzi ebalulekile futhi angasetshenziswa njengendlela yobuciko.
Buddhism - I-Mandala nayo inokusebenzelana namaBuddha, ayisebenzisa emidlalweni yabo yenkolo nokuzindla. Isetshenziswe njengesibonakaliso sokulinganisela empilweni.
I-tattoo ye-Mandala ibe yinto abantu abaningi abasebenzisa ukumela izinto eziningi ekuphileni, njengezidalwa zasezulwini. I-tattoo ingasetshenziselwa ekwenzeni izitatimende eziningi ongakwazi ukuzibona uma ungumuntu othanda ukuthatha i-tattoo enhle futhi ufuna umqondo.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo wamanje we-mandala womdwebo wamadoda nabesifazane.
I-Tattoo tattoo isibe uphawu lwethando, ukuthula nokuzinikela. Kuyinto isidalwa esingcwele kumKristu futhi uye waba udumo phakathi neminyaka. I-tattoo yehoba ifikile ukuhlala nathi ngenxa yobumnene bayo. Abantu abaningi bamukela ubuhle obuza nale tattoo. Kunezincazelo eziningi ezihlobene nejuba. Imelela ukuzala, ubufazi kanye nobuhle.
Ijuba le-tattoo lisho okubaluleke kakhulu emhlabeni. It isetshenziswa njengendlela tattoo for ukubekezela. Imela ukuzinza nokuqhubeka. I-tattoo yehobe yenzelwe ukuba ibe mnandi. Ijuba elimhlophe limelela ukuhlanzeka nokungabi namlandu. Akumangazi ukuthi amanye amantombazane amancane ayengena enkingeni yawo yokuqala njengophawu lobumsulwa nokukhathalela. Abantu banganezela ezinye izithombe eceleni kwejuba kuhlanganise nokusebenzisa imilayezo ukutshela incazelo ehlukile yombhalo wejuba le-inking umqondo.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo womdwebo wamathambo wamanje wamadoda nabesifazane.
Moon tattoo kusho
I-tattoo yenyanga iye yaba uhlobo olulodwa oluthandwayo lwe-inking ngenxa yokuthi lwalumelela. Abantu abaningi abayinki bayakholelwa ukuthi inethonya phezu kwamandla asezulwini kanye nokwenyama, ibonisa umlando nesayensi. Abantu abasebenzisa le tattoo bangenandaba nalokho okushiwo ngenhla ngoba tattoo yenyanga inezincazelo eziningi. Inombolo yezincazelo ukuthi inyanga inayo yiyona eyenza ibe yinto engavamile. Ingahlanganiswa nezinye izithombe ukukunikeza izincazelo ezimangalisa. Ezinye izincazelo zenyanga zingaba magic. Labo abakholelwa emlenzeni bangayinwa i-tattoo kunoma iyiphi ingxenye yemithambo yabo. Imvelo yenyanga yinto eyenza abantu bawuthe inkanyezi emizimbeni yabo kuyilapho labo bekusho ukuthi limelela ukondla nokungcola.
Inyanga ingabuye ibe nencazelo ebusweni bami besifazane. Inyanga ingabonisa ubuciko kanye nalabo abafuna ukuzala, ithuluzi eliphelele. Inyanga nayo ibonisa ukukhula, ukungalungi, inkumbulo yabalingani bakho, ukungabi nalutho, inkolelo ye-Wiccan, ukukhishwa kwamandla okungalungile kanye nezinhlangothi ezimnyama. I-tattoo yenyanga ingamelwa eceleni kwezinye izinto ukuyibeka leyo ncazelo ekhethekile.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo womklamo wamuva wenyanga wokudweba abesilisa nabesifazane.
Umklamo we-octopus tattoo uyisimanga ngokwayo yingakho abantu banezinhlangothi ezihlukene zomzimba wabo. I-tattoo iyinkimbinkimbi futhi lokhu kuyindlela ehlukile ngayo. Ukukhohliswa komuntu siqu noma okuyimfihlakalo we-octopus yilokho okwenza izici ze-octopus. Izinganekwane zasendulo zithi i-8 njengenombolo ibalulekile ezicini eziningi zokuphila. Yingakho izidalwa ezinemilenze eyisishiyagalombili zibhekwa njengezinamandla. I-octopus iwela kulesi sigaba sezidalwa zamanga. I-octopus tattoo okusho ukuthi ivela emandleni amakhono okukhula. I-tattoo ingasho ukuvuselelwa nokuvuselelwa.
Abantu abaningi basebenzise ukukholelwa ukuthi amadlelo abo angasuswa. I-Octopus tattoo futhi isho ukuthi kukhona ithemba esikhathini esizayo. Ikhono le-octopus ukwenza izinto eziningi ezinemilenze yalo eminingi yilokho okwenza abantu bakholelwe ukuthi isidalwa siningi. Kubonisa ukuthi i-octopus tattoo yilabo abadinga ukuzalwa kabusha. I-tattoo isho ukuthi imilingo, ihle kakhulu futhi ayikho. Ukuklanywa kwe-octopus nakho okwenza ukuthi kuvelele esixukwini ngoba ikhono layo lokusekela.
Chofoza lapha ukuze uhlole i-octopus tattoos design idea emadodeni nabesifazane.
I-tattoo tattoo ingenye yezindawo ezidume kakhulu ikakhulukazi kuma-Asiya. Incazelo ye-tiger yiyona eyenza ivelele. Umdwebo we-tiger yilokho okubonisa ukuthi umuntu uhlala kanjani ngaphandle kwemingcele. Bamelela izinzwa, ubukhulu, amandla namandla. Kungathiwa yi-totems yelanga ngoba bakholelwa ukuthi babuswa amandla asezulwini.
Abantu abahamba nge-Tattoo tattoo abalawulwa yithando ngoba bakholelwa ku-instincts. Abathandi bayayinatha le tattoo ukuze babonise ukuthi bangaba namandla kangakanani. I-tiger ikholakala ukuthi iyisivikelo salabo abaye bafa. Yingakho bavame ukubonakala emathuneni noma emathunjini.
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamuva we-tiger womdwebo wamadoda nabesifazane.
I-Dreamcatcher tattoo ithandwa kulabo baseMelika America. Umdwebo we-tattoo ubonisa ifa elihle lamasiko abantu. I-tattoo ye-dreamcatcher iyasiza ekususeni amandla amabi nebizo. Abantu abafuna ukusongela iphupho elibi noma ama-nightmares basebenzise i-tattoo dreamcatcher. Labo ababa inkinobho bayakwazi ukulala ngokuthula nangenjabulo. Uma uhlela ukuthola i-tattoo design eyingqayizivele ezokhuluma izindaba eziningi ngokumelela kwayo empilweni ingasebenzisa i-tattoo dreamcatcher.
Chofoza lapha ukuze uhlole i-dreamcatcher ye-dreamcatcher umqondo womqondo wabesilisa nabesifazane.
Incazelo Yokhozi I-tattoo Designs yinto ongathanda ukuyithanda. Kunezincazelo eziningi eziza ne-tattoo. Ukhozi luyizinyoni eziye zagubha emhlabeni wonke futhi zinamathele kuwo. Kungasho amandla, ithuba, ukuhlakanipha, inkululeko, ubukhulu nobuningi, amandla, ukubusa, ithuba, isithunywa sabonkulunkulu kanye nengokomoya. Kusho izinto eziningi kakhulu emandleni amaningi. Ukuklama kwenza kube okuyingqayizivele ngethonya layo elibusayo lazizwa nxazonke. Kukhona ukuhlukahluka kwezinkozi eziza nezincazelo zazo.
Amaphiko ezintshontsha akhuluma ngenkululeko nokuvikelwa. Uma ufuna inkululeko, enye ye-inking ongahamba ngayo iyona tattoo eagle. Isivikelo esinikezayo kungani abantu abaningi basebenzisa khona ukuze banakekele ububi. Umdwebo we-tattoo eagle uyenziwa ngendlela yokuthi incazelo ehambisana nayo ibizwa ngokugcwele. Yingakho idume futhi iyingavamile. Ukutholakala kwenyoni yinto ehlonishwayo emhlabeni jikelele. Uma ufuna ukuba nesimemezelo esibalulekile sobukhulu obunamathemba emzimbeni wakho, i-tattoo ye-eagle yinto eyokwenza lokho kuboniswa.
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamuva we-ukhozi umqondo womklamo wamadoda nabesifazane.
I-tattoo yamehlo ivame kakhulu emasikweni ahlukahlukene futhi ihluke nakwabaKristu ukuya esikolweni saseGibithe. Iso lizokusiza ekufanekiseni u-omniscience, ukuvikelwa noma ukucaca. Abanye bangase basebenzise ukumela imizimba. Kungakhathaliseki uhlobo lwenhloso onayo, i-tattoo yeso yinto eyokusiza ekumelelweni kwakho. Ngisho noma ungumhlubuki, iso liye lamboza. Akekho omelelwa embonweni we-tattoo futhi uma uyakwazisa indlela yokuphila yowesifazane, awukwazi ukukwenza nge tattoo iso.
Iso lezidalwa ezahlukene limelela izinto ezahlukene. Thatha, isibonelo, amehlo ama-horus nabanye, unama-tattoo okushiwo okubalulekile kumuntu ogqokile. I-tattoo yeso ihle kakhulu futhi ibuye ilandise ngobukhulu besikhathi esizayo. Iso liye laba umdwebo we-tattoo okwenza abantu baqonde indlela yabo yokuphila. Imvelo yonke yokubona yabonkulunkulu ingabuye iboniswe ngamehlo.
Chofoza lapha ukuze uhlole imidwebo yamuva yezithombe zomdwebo wamadoda nabesifazane.
I-tattoo ye-Flower ivamile futhi iyathandwa emasikweni ahlukahlukene emhlabeni. Ngokwesiko, i-tattoo ye-flower iyinhloko yabesifazane. Ubuhle bezimbali bumelela izinto eziningi kuye ngokuthi imbali esetshenziswa. I-flower rose inezincazelo zayo njengamanye izimbali ezinencazelo yazo futhi. I-Japanese flower tattoo ingenye yezinto ezithandwa kakhulu futhi inencazelo ebalulekile kuyo. Izimbali zingabonisa izinzwa, ukukhiqiza, ukuzala, ukwesekwa, iphupho, imilingo, ukwazisa, ukunakekelwa nothando. Incazelo yembali ihlobene nomlayezo wokuthi ukugqoka kudinga ukudlulisela kwabanye.
I-tattoo ye-Flower ayikwazi ukungazinaki ngenxa yamatshwayo ayenayo. Abantu manje banezela imiphumela yemilingo kuso ngokudweba ezinye izinto noma izinto kuzo ukuze banikeze uhlobo olukhethekile lomlayezo olungabhekiselwa kubo kuphela. Yonke imbali kusukela e-rose kuze kube sembali ye-lotus inezincazelo zayo. Nguwe ozokhetha ukuthi uhlobo lomlayezo ofuna ukudlula. Izincazelo ze-tattoo ze-Flower zingenye yezinto ezinhle kunazo zonke ngenxa yezincazelo ezinkulu nemifanekiso ababelana ngayo emhlabeni wonke. Lapho izimbali zengezwa amagama, imibala nezinto, zikhombisa izincazelo ezinkulu.
Chofoza lapha ukuze uhlole imidwebo yakamuva yama-tattoos design umqondo wabesilisa nabesifazane.
I-tattoo yejometri kusho okungaphezu kwalokho ongakucabanga ngakho. Inomklamo okhethekile ofana ne-motif. Lokho okukhulunywa ngakho kuqhubeka futhi kuqondile. Ukuma kunokuningi okuphathelene namathematika futhi bekulokhu kuboniswa ukuthi abantu abaningi basebenzisa ukumela ukucacisa, ukulinganisela nokuvumelana. Ikhuluma nangokubikezela ngenxa yendlela umklamo owenza ngayo.
I-tattoo ye-geometric isho ukuthi kungasho ukunethezeka nokuhleleka. Konke nge-geometric ikhomba ekugculweni nasenjabulweni, futhi nendlela eyinki ngayo yenza kube uhlobo olulodwa olungavamile lwe-tattoo. Isihluthulelo senjabulo yabantu abaningi singadonselwa ku-tattoo. I-tattoo ye-geometric ibe yilelo bhuloho elisebenzisa okuningi ekutholeni lokho abaye bakufeza empilweni.
Chofoza lapha ukuze uhlole imidwebo yakamuva ye-geometric umqondo womklamo wamadoda nabesifazane.
I-Hamsa tattoo isho okukhulu futhi inezincazelo ezihlukahlukene emhlabeni jikelele. I-tattoo iqukethe amaphethini kanye nezimpawu ezinikeza lo mzwa wokuhleleka. Labahlanu ku-tattoo kubonisa izinzwa zomuntu. Kukholelwa ukuthi i-tatsa tattoo ibonisa ukuzethemba, ukuvikelwa, ukuzola nokuqina. Kunezindlela ezimbili umdwebo we-hamsa ongamelwa. Okokuqala, ingasetshenziswa ekugcineni izinto ezimbi noma ezimbi. Into elandelayo yilokho esetshenziselwa ukuletha inhlanhla.
I-tatsa tattoo ingenziwa ngezifiso eziningi ngezindlela eziningi ezifana nokuthi uma isetshenziselwa iso, ingasetshenziswa ukumela ukuvikelwa; iso likaHorus. Kukholelwa ukuthi leli liso lingahlala libukele abantu futhi libalekele ngisho nokubi. E-Islam, tatto tattoo ingasetshenziswa ekukhulumeni ngemifanekiso emihlanu yamaSulumane. Yingakho ibizwa ngokuthi nguFatima. Isandla sikaFatima simelela uFatima Zahra. UFatima, indodakazi ka Muhammad.
EbuJudeni, limelela izinzwa ezinhlanu emthandazweni wabo kanye neTorah izincwadi ze-5. I-Hamsa tattoo isho ukuthini amasiko amaningi asetshenziselwe ukwazisa ezinye zezinkolelo nezinkolelo zabo. Kusho okungaphezulu kwalokho.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo wamuva we-hamsa womdwebo wabesifazane.
I-scorpion tattoo kusho okuningi kubantu abavela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. I-tattoo ifanekisela futhi isekelwe kakhulu ekuziphatheni kwesidalwa. Kungabonisa ukuvusa kanye nobulili besilisa ngenxa yohlobo lomdanso okwenza ngesikhathi sokubuthana. Isetshenziselwa ukumela ukuhlinzwa kwamaMeya kanye ne-scorpion esetshenziswa izinkolo ezahlukene ukuchaza izinto ezahlukene, ikakhulukazi ezihambisana nobubi. Kungasetshenziselwa ukusho ukuvikelwa futhi kumelela umpi.
Abaningi abasindile umdlavuza basebenzisa i-tattoo ukuze batshele indaba yomzila wabo womdlavuza. Abaqaphi noma ngisho nababhokisisi bavame ukubonakala besebenzisa tattoo ukuze babonise ukuthi bangobani. I-scorpion tattoo isho ukumelana nokulwa kodwa abanye bayithatha isho ukuthi sizwela, sihloniphekile futhi sihloniphekile. I-tattoo nayo ingasetshenziswa ekukhulumeni ngesifiso, ukuqina, ukulwa, ukukhuthazela, ukuvikelwa, ukubekezela, ukuzivikela, ukufa, ukwethembeka nobubi.
Unquma ukuthi ufuna ukuthini i-scorpion tattoo yakho. Kunezinhlobo ezahlukene ze-scorpion tattoo designs ongakhetha kuzo futhi ngamunye wabo unezincazelo zawo. Kodwa-ke, unganika ukuthinta ukuthinta into yakho.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wamuva we-scorpion womdwebo wamadoda nabesifazane.
Ama-Tattoos Meanings ahlukeneyo avela endaweni eyodwa kuya kwenye. Kunezinhlobo ezahlukene ze-skulls futhi zinezincazelo zazo futhi. Umqondo wokuthi i-skull ibhekisela ekufeni ukufa kwenani elikhulu labantu kungase kungabi yiqiniso ikakhulukazi uma ludonselwa nge-eye enkulu. I-skull ingadonselwa ngezindlela eziningi futhi iqukethe izincazelo ezinkulu ozithandayo. I-tattoo ye-skull ingaba isikhumbuzo somuntu oshona futhi nokuthi sonke kufanele siphile kulo mpilo ngokugcwele.
Imiklamo ye-skulls nayo inezincazelo zayo njenge-tattoo ethandwayo e-skull tattoo ngokuvamile ebizwa ngokuthi i-tattoo skull yaseMexico noma i-tattoo skull tattoo. Thatha isibonelo abaseMexico bathanda usuku lweT tattoo ngenxa yendima ebeka kuyo.
Abesifazane bavame ukusebenzisa imibala ekushintsheni indlela abantu ababona ngayo i-tattoo kanye nezincazelo nazo ziphelile kakhulu.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wamuva we-skull womdwebo wamadoda nabesifazane.
Okushiwo i-Sun ne-Moon Tattoos yiyona into okufanele uyiqaphele lapho uthola inkinga. Umbono we-tattoo welanga nenyanga unemibono eminingi kanye nemiklamo yokuthi noma yimuphi umuntu we-fashion savvy angasebenzisa. Ukuma kwenyanga nokuma kwelanga kukhuluma ngomjikelezo wokuphila ongapheli. Uma ilanga nenyanga zifakwa ngaphakathi kwendilinga, incazelo ingase ihluke.
Ukukhuluma nge-tattoo yelanga, limelela amandla, amandla nokuzalwa kabusha ngenkathi i-tattoo yenyanga ingabonakalisa isici sezinsikazi zokuphila kwamanye amasiko uma kuziwa kunkulunkulukazi. Lapho ilanga nenyanga zinemibala, izincazelo ziyahlukahluka kuye ngokuthi imibala oyikhethile. Ilanga elivame ukusho ukuthi isici somuntu singase sihlangane nenyanga ukukhombisa ukuncoma kwe-Yin Yang. Ubuhlobo besifazane nabesilisa bufanekisela ngokuphelele ilanga nelanga le-tattoo.
I-Sun neyezi tattoo ingakhuluma ngesifiso esinamandla phakathi kwabathandi. Yingakho ukuhlanganiswa kwezidumbu ezimbili zasezulwini kuye kwaba yinkimbinkimbi ye-tattoo design engasetshenziswa yinoma ubani. Umdwebo ngamunye we-tattoo ungenziwa ngezifiso.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo womklamo we-sun kanye nenyanga wendlela yokuklama yamadoda nabesifazane.
I-Sun Tattoos ibilokhu ivame ngisho naphakathi nezinsuku zasendulo. Ubunjalo bezithombe zelanga yilokho okudonsela kubo bobabili besilisa nabesifazane. Ukubaluleka kwelanga kungahle kungabi nhlobo noma kulungile futhi lokhu kuncike kumasiko kusuka lapho umuntu evela khona. Akuyona imfihlo ukuthi impilo ayikwazi ukuqiniswa ngaphandle kwelanga. Ilanga lingasho impilo, amandla, amandla, uthando nokusekelwa kwempilo. Kungabuye kusho ukuzalwa kabusha futhi ezinye izinkolo nazo zisho izincazelo ezikhethekile ngelanga. Kunezindlela ezihlukahlukene ukuthi i-tattoo yelanga ingadonsela futhi ibe nezincazelo zazo. Ilanga elikhulayo lingasho amandla aphezulu nobukhona obukhulu. Abantu abaningi basebenzisa ilanga ukuba baphume njengelanga elidonswayo le-tattoo abalandeli abaningi bezemidlalo abasebenzisa.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wamuva wezithombe zokudweba kwelanga amadoda nabesifazane.
I-tattoo yomuthi isibe uphawu lokuhlangenwe nakho okuqinile nokuhlala isikhathi eside. Izihlahla zihlale isikhathi eside futhi zichitha iminyaka engu-500 emhlabeni, isizukulwane esiphezulu sabantu. Yingakho imithi ingenwa ukubonisa impilo ende futhi iqiniseke. Amandla omuthi nokujwayela kwawo kunoma yisiphi isimo yilokho okuthandekayo kubantu abaningi. Noma ubani angaba inkinobho emzimbeni wabo. Isihlahla singanikeza amakhaya nokuphepha ezidalwa eziningi. Ukuphepha okuletha kwabanye kuyinto ephawulekayo. Labo abafuna ukuphepha empilweni yabo bayakwazi ukuyisebenzisa nge-inkings yabo. Ziyizinhlobo eziningi zemithi enezincazelo ezahlukene kanye nokubaluleka.
Umuthi usetshenziselwa ezinye izindlela zenkolo ngenxa yokuthi kubaluleke kangakanani. Ngenani lezihlahla ezitholakalayo nesenzo esingokomfanekiso esimele, noma ubani angasisebenzisa. Ungasebenzisa isihlahla esiseduze nesiko lakho ekwenzeni ezinye izitatimende ezinesibindi emzimbeni wakho. Isimo esingokomfanekiso somuthi singenza incazelo eningi ngokwezifiso zomuthi wakho womdwebo emzimbeni wakho kuye ngokuthi yimiphi umyalezo ofuna ukuyidlulisa.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wamuva womuthi womdwebo womuntu wesilisa nabesifazane.
Crown tattoo incazelo
I-tattoo yomqhele iyisipesheli ngoba kusho amandla negunya lobukhosi. Umqhele usetshenziselwa ukuba ube nomnikazi wezinto eziningi. Labo abavela emakhaya asebukhosini babonakala kalula ngombono womqhele ngoba usondelene nezinhliziyo zabo. Azikho izindawo emhlabeni ukuthi umqhele awubalulekile. Ukumelwa komdwebo womqhele yilokho ngisho nabesifazane abakwazi ukubhekana nabo.
Umdwebo womqhele ungasetshenziswa ukumela ubuholi. Labo abakhethiwe bangayinwa le tattoo ukuze babatshele ukuthi bakhona. I-tattoo iyingqayizivele futhi ingakhuthaza abantu ukuthi balandele amaphupho akho. Ungathola ukuphefumlelwa okudingayo uma ukiyipha lezi zithombe emzimbeni wakho. Kuthatha mayelana nobukhosi bomuntu owunayo. Kuthatha mayelana nokuzilawula futhi kukhuluma ngokuvuleka komuntu ophethe i-tattoo.
Kunezinhlobonhlobo zobukhulu bale tattoo futhi nguwe okufanele unqume ukuthi ufuna umqhele wakho ubukeke kanjani. Ekupheleni kosuku, umqhele umelela okuthile okukhudlwana futhi okunenjongo ongayithola.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wamuva womqhele womdwebo womqondo wesilisa nabesifazane.
Ama-tattoo ama-diamond amathrekhi ahlonishwa kahle ahlotshaniswe nobuhle nengcebo. Lezi zithombe zibonwa ezindaweni eziningi zomzimba futhi zisetshenziselwa ukuhlobisa. I-tattoo yedayimane ingasetshenziselwa ukukhuluma ngokungenakunqotshwa. Lesi yisibonelo esifanele sokuthi i-tattoo inikeza ngoba ayikwazi ukubhujiswa.
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamuva we-diamond womdwebo wamadoda nabesifazane.
I-tattoo ingahle ibekwe ngokwezifiso ukuze ibe nezinto eziningi ekuphileni njengokuphila, ubungane noma uthando. I-tattoo ifanekisela izinhliziyo noma ngisho nezinkanyezi. I-Tattoo engapheli yinto ongase ufune ukuyisebenzisa ekushayeleni lowo mlayezo onamandla othanda umphakathi.
Akekho owenza kangcono uma kuziwa kumattoo angenasisekelo. Indlela eklanyelwe ngayo kanye nokumelelwa kokuhlaziywa kwezibalo okukhuluma ngakho. I-tattoo engapheliyo isuke isigijimi esikhethekile somyalezo wokuthi ngisho namadoda ayethanda ukusebenzisa ukutshela abalingani babo ukuthi bazimisele ukuba ngcono kunangaphambili. I-tattoo engapheliyo ifika ngezindlela ezihlukahlukene nobukhulu. Okushiwo kungenziwa kwandiswe kakhulu uma kwengezwa ezinye izinto ukuze kube yinto ehlukile futhi emangalisa.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo womklamo wangakapheli wezintambo zamadoda nabesifazane.
I-Samurai tattoo yilelo tattoo elithola ikhodi engavamile ebizwa ngokuthi i-bushido-okusho izindlela zokulwa. I-bushido inezingxenye eziyisikhombisa ezibalulekile ezikhuluma ngeSamurai. I-tattoo imelela ubuqotho, inhlonipho, umusa, ukwethembeka, ukwethembeka kanye nenhliziyo. I-tattoo iphinde isetshenziselwe ukukhuluma ngesibindi, amandla nokuhlakanipha. Kungabonakaliswa ezintweni ezingavamile futhi eziyingqayizivele njenge-octopus, i-koi fish kanye ne-octopus ukumela ukuvikelwa, usizo nesibindi.
I-tattoo ye-Samurai yenza ngcono ukuthi abantu babame abalingiswa babo abesabindi nesibindi. Babefanekisela amandla namandla. I-tattoo ingaba yisilisa futhi amadoda ayathanda ukuyisebenzisa ekuphumeleleni ukulwa nokufa. I-Samurai tattoo ikhuluma ngobuntu bomuntu obembetheyo. I-tattoo ingaba yowesifazana futhi ithathwe ngokukhethekile ngabesifazane. Incazelo yeSamurai ingahamba phambili ekutsheleni abanye indaba ongakwazi ukuyisho.
Chofoza lapha ukuze uhlole ama-samurai tattoos umqondo womqondo wamadoda.
I tattoo ye-sunflower kusho izinto eziningi. Imbali iyaziwa ngesakhiwo sayo futhi ingaba ihlobo lalabo abathanda ilanga, uphawu lwehlobo noma ngisho nokuzijabulisa. Kuyinto imbali ezinikezelwe ilanga futhi ibe yinto efanekisela ukuthuthukiswa kokuphila. Kungagqunywa njengomqhele futhi njalo kubonisa ilanga. Abantu bayithatha njengesibonakaliso sobuqotho, injabulo, indalo, ukufudumala nokukhanya.
I-tattoo ye-sunflower ingadonselwa ngezindlela eziningi nobukhulu, futhi nalezi zisho. Nguwe ongenza i-sunflower yakho ihambe idlule ilanga lokubaluleka kokuthile okujule kunabanye abangacabanga ngakho. Abanye abantu bengeze izinto ngisho nemilayezo kulokho okushiwo i-tattoo. Amasiko amaningi nawo anezincazelo zawo ezikhethekile mayelana ne-sunflower. I-tattoo isibe yinye yezintandokazi zalabo abafuna ukukhombisa icala labo impilo ngendlela efudumele. Ukukhanya kokuphila kungaboniswa ngokuziqhenya emzimbeni ngokusebenzisa ukufakwa okuhlukile. Ingxenye ngayinye yomzimba ingasetshenziselwa ukutshela incazelo ye-sunflower.
Chofoza lapha ukuze uhlole umbono wamuva we-sunflower umdwebo womklamo wabesifazane.
I-Henna tattoo kusho
I-Henna tattoo kusho into ebalulekile kulabo abathwala. Kuyinto ukuhlobisa yasendulo emzimbeni onenshokutsi eminingi. Isetshenziselwa ukumela injabulo, inhlanhla futhi ingabonakalisa impi, ukuzalwa, izibusiso nemishado. I-tatna tattoo isetshenziselwa ukukhuluma ngendlela enembile futhi ekhululekile. Ukusebenzisa i-henna kuyinto eyokunika lokho kuxhumana okungokomoya futhi inezimpendulo ezithintekayo ezisetshenziswa kuyo.
Ingxenye ngayinye yomzimba ukuthi i-henna ifakwa ibe nokubaluleka kwayo kanye nezincazelo ezikhethekile. Kungabekwa phezu kwezintende zokugqoka ukuze ukhulume ngezibusiso futhi uma ubeka esandleni, ukhuluma ngokuvikelwa futhi isihlangu sibuye senezelwe kuso.
I-Henna tattoo ingenye ye-tattoo abantu abayisebenzisayo ukubheka okuyingqayizivele ngenxa yokubaluleka komuntu ogqoka. Kunezinto ezingabekwa ngazo ukuze zibenze zichaze incazelo ekhethekile noma indaba. I-henna ingamandla emklamo wayo kanye nencazelo yayo. Ungakwazi ukuphuma esixukwini uma usebenzisa i-henna tattoo ukwenza isitatimende esinesibindi sokuthi uhlale ufuna ukutshela umhlaba futhi awukwazanga ukwenza lokho.
Chofoza lapha ukuze uhlole i-henna tattoos design design yamuva yamadoda nabesifazane.
Cat tattoo incazelo
Okushiwo yi-Cat Tattoos kungasho izinto eziningi. Ogqoke ngumuntu ozonquma ukuthi uzokwenzani nge-tatine feline. Ikati lifanekisela izici eziningi, ezihlanganisa inhlanhla, ukuchuma, amandla wesifazane, izimfihlakalo, imfihlakalo kanye nokuxhunyaniswa nobuNkulunkulu, ingokomoya, ukuzalwa kabusha, ukuxhumana ngemva kokufa, ukuvikelwa, intuition, intelligence, ukulungiswa, ubuhle nokulalela.
Ukinkwa kwamakati kunomqondo wokuba umama, ukuvikelwa, ukuzingela ngisho nokunakekelwa nokuletha inzuzo. Ungaya kuma-tattoos wekati ngoba kuchaza ukuhlakanipha, umusa, ubuhle nobuhle. Nokho, kuye kwahlotshaniswa nobuqaba nobulovu eYurophu.
Amakati asetshenziselwa ukukhuluma ngokuzimela empilweni. Abantu abaningi abacabanga ukuhamba into engavamile futhi ekhethekile bangaya ku-tattoo yekati. Okushoyo kubalulekile futhi kuyamangalisa kakhulu ukuqonda. Amathrekhi emati ayengezwa kwezinye izinto ukuze aqiniseke ukuthi anezincazelo ezihlukile kulokho okungenzeka ukuthi wakucabanga ngakho ngaphambili. Incazelo ye-cat tattoo ingaba yintando futhi futhi yiyiphi isizathu abaningi besifazane abaya kuyo. Ukulalela okwenzekayo kungabonakali futhi kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abaningi bazofuna ukusondela ekupheleni kosuku.
Chofoza lapha ukuze uhlole imidwebo yakamuva ye-cat tattoos umqondo wabesilisa nabesifazane.
I-tattoo yesiphambano isho izinto eziningi kubantu abaningi. Lokhu kungabhekisela ezintweni ezilandelayo, Ukuhlangana komuntu wesifazane nowesifazane, i-Atheism, Ukusebenzelana nemimoya, Ubuhlungu ngokuthanda noma ukulahleka, Ukuthula, Ukuziphatha, Ukuqina, Isibindi, UbuKristu / ukholo lobuKristu, Ukuphila, ilanga / ilanga, ukukhulekelwa, ukulingana, ukuhlupheka, ukufa , IsiGothic / isiGoth, imvelo, insikazi, ukuzinikezela, ukuhlanganiswa, inhlonipho, ukuphakama, amagugu amasiko / umndeni kanye nememori yothandekayo. I-tattoo yesiphambano ithandwa kakhulu futhi inokubaluleka komuntu siqu, okujulile, yamasiko namlando okungenziwa ngezifiso.
Abesilisa nabesifazane basebenzisa i-tattoo ngezizathu eziningi futhi ngezwi elibanzi lokusho ukuthi i-tattoo iza nayo. Iningi labantu liyifake ngokwezifiso ukuthi libukeke ngendlela emangalisayo futhi nguwe okufanele unqume ukuthi ufuna ukuthini isiphambano sakho. Ekupheleni, yilokho owenza isiphambano sakho ukuthi kuzoba kuwe. I-tattoo yomgwaqo ingafakwa ezintweni eziningana ngisho nemilayezo yokushintsha indlela ibukeka ngayo. Thatha isibonelo, isiphambano esiza ngezindlela ezahlukene nobukhulu. Ayikho ingxenye yomzimba ukuthi ayihambisani nayo. Iyini incazelo ye-tattoo? Abantu abaningi banezincazelo ezihlukile kulo. Kubaluleke kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi uyiphi inkinobho emzimbeni wakho.
Chofoza lapha ukuze uhlole umdwebo wamuva womdwebo womdwebo wamadoda nabesifazane.
Chofoza lapha ukuze uhlole usuku lwamuva lwama-tattoos umdwebo womdwebo wabesilisa nabesifazane.
I-tattoo yenhliziyo kusho ukukhunjulwa, isifiso nothando. Kunezinye izincazelo zenhliziyo futhi lezi zisho zivela endleleni abamele ngayo. Indlela inhliziyo edonsa ngayo kusho izinto eziningi kumuntu ogqokayo. Imibala, ubujamo nobukhulu be-tattoo yinto eyenza isimangalisa ngendlela emangalisayo. Ungayisebenzisa ukutshela indaba yothando. Inhliziyo isetshenziselwa imikhuba ethile yenkolo ngenxa yokuthi kubaluleke kangakanani. Ngenani lezinhliziyo ezitholakalayo nesenzo esingokomfanekiso esimele, noma ubani angayisebenzisa. Ungasebenzisa inhliziyo esondelene nesiko lakho ekwenzeni ezinye izitatimende ezinesibindi emzimbeni wakho.
I-tattoos yezinhliziyo ezinye ze-tattoos ezinhle kakhulu ongayibona nxazonke. Kuyinto engavamile futhi ekhethekile. Akuwona wonke umuntu obona lezi tattoos on. Uma ufuna umdwebo we-tattoo ukuze ufune ukukhululwa kwakho, lo tattoo umane nje ozohamba ngenxa yobuhle nokubaluleka. I-tattoo ye-Heart ayithandwa kuphela kodwa futhi iyathandeka ukubona uma imilayezo ingeziwe kuyo. Imicibisholo nayo ingezwe kuyo ukuze utshele indaba.
Chofoza lapha ukuze uhlole umqondo wamuva womqondo womdwebo wamadoda nabesifazane.
izithombe zezingonyamakoi fish tattooi-octopus tattooizithombe zezinhlangaimibono ye-tattooflower tattoosamathrekhi we-butterflyama-cat tattoosumdwebo we-watercolorama-tattooTattoos zeJomethrikhiTattoos yama-Ankletattoos eaglerose tattoostattoos udadeI-Feather Tattooukubuyisa izithombetattoo engaphelii-henna tattooI-Heart Tattoosukudubula izithombei-compass tattooama-sun tattoosama-tattoo amahangei-cherry ehlobisa i-tattooabangani bomngane abangcono kakhuluumdwebo womcibisholouthando izithombeizithombe zezinyangaidayimani tattoolotus flower tattooama-tattoo kubantuumculo womdweboizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyezii-scorpion tattooama-Tattoos amantombazanetattoos zomqheletattoo isoangel tattoosamathumbu esifubatattoos cutebird tattoosimidwebo yamasleeumdwebo wezindlovuizinyawo zamathamboama-tattoos engalodesign mehndiimisindo yezintamboimibhangqwana emibhangqwanangesandla izidakamizwa